Hal-guji soo kabashada xogta Ghost - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Hal-guji soo kabashada xogta Ghost
Hal-guji soo kabashada xogta Ghost
Noocyada furaha-furaha ah ee 'Ghost' iyo furaha hal furaha ah iyo soo celinta kombiyuutarka ayaa aad looga jecel yahay Shiinaha, kuwaas oo runtii fududaynaya hawlgalka rakibinta Windows oo ku habboon dadka isticmaala. Haddii aan isticmaalo hal fure fure ah iyo barnaamij kale oo software ah si aan u soo celiyo nidaamka Windows oo aan u ogaado in qaar ka mid ah xogta muhiimka ah aan horey loo sii taageerin, maxaan sameeyaa? Maqaalkani wuxuu sharxayaa sida loo isticmaalo Bplandatarecovery si loo soo ceshado xogta xaaladdan. Qiyaasta saamaynta xogta soo kabashada
Inta badan isticmaal hal-guji 'Ghost' iyo barnaamijyo kale, waxaa jira labo xaaladood: mid waa in Windows-ka dib loogu soo celiyo kombuyuutarka, badiyaa la isticmaalo Qaar ka mid ah aaladaha baakadaha Ghost ayaa loo isticmaalaa tan; tan labaad waa in Ghost iyo barnaamijyo kale lagu rakibay kombiyuutarka, nidaamka qaybtiisuna uu taaganyahay Sababo badan awgood, sida nidaamka oo hoos u dhigaya, fayras, iwm., Gurmadkii asalka ahaa wuxuu u baahan yahay in dib loo soo celiyo. . Si kastaba ha noqotee, haddii Ghost uusan fulin hawlgalka dib-u-celinta, wuxuu kaliya dib ugu soo celiyaa Windows qaybta nidaamka asalka ah (badiyaa qeybta 'C') ama wuxuu soo celiyaa Windows-ka asalka ah. Hagaag, marka ugu horeysa, xogta qaybinta nidaamka aan is bedeli doonin, dabcan, looma lumi doono; marka labaad, nidaamka nidaamka, maxaa yeelay rakibida cusub ee Windowska ama Windows-ka asalka ah ee la soo celiyay, waxaa jiri doona xog badan oo qoran, marka waxaa hubaal ah inay jiri doonaan daboolida xogta. Su’aal, intee data la soo celin karaa, waxaa kaliya oo la go'aamin karaa ka dib markii la iskaa iskaanka qeybinta. Haddii Ghost uu sidoo kale fuliyo howlgalka dib u laabashada (badanaa kiisaska dib u gelinta Windows), markaa ma aha oo keliya qeybta nidaamka ayaa dib loo daabacay, qeybaha kale ayaa asal ahaan loo qoraa qeybta ka dib dib-u-noqoshada Xogta macluumaadka sidoo kale waxaa laguugu qori doonaa qaddar yar oo data ah, sidaa darteed xogta qaar ee qaybaha ma-hababka ah ayaa laga yaabaa inaan dib loo soo noolayn karin. Waa kan habka gaarka ah ee dib loogu soo celiyo xogta iyadoo la adeegsanayo Bplandatarecovery kadib hal-guji Ghost:
Marka hore. Tallaabada, ka saar mashiinka adag kombiyuutarka si aad u soo celiso xogta, oo ku dheji kumbuyuutar kale. In kasta oo ay jiraan dariiqooyin qaarkood oo ku saabsan kumbuyuutarka asalka ah ee lagu soo kaban karo adoo aan ka saarin diskka adag, haddii aadan khabiir ku ahayn aaggan, waxaa lagugula talinayaa inaad ka saarto diskiga adag isla markaana ku dhejiso kumbuyuutar kale. Marka sidaas la sameeyo, waa amaan, ku habboon, iyo wax ku ool ah in xogta la soo celiyo. Tallaabada labaad waa in la xusho nidaamka qeybaha ee disk-ga adag, iskaanka oo fiiri saameynta soo kabashada. Haddii kaliya soo kabashada xogta nidaamka qeybi nidaamka uu ku lug leeyahay, maamulo Bplandatarecovery, xulo qeybinta nidaamka, guji batoonka midigta ah, oo xulo kabanka faylka ee soo kabsaday ama qaab u samaysan, sida ka muuqata hoosta. Waxaa loo muujiyey sida soo socota:
Guji badhanka "Bilow" badhanka daaqadda faylka ee dib loo helay, sida ku cad hoose:
< Soo kabashada ikhtiyaariyada feylalka
Intaa kadib, Bplandatarecovery wuxuu bilaabayaa inuu iskaan qeybsamo nidaamka, sida hoos ku cad:
Bplandatarecovery wuxuu soo bandhigi doonaa feylasha la iska baarayo ee ku jira istcimaalka guud Users-ka wuu arki karaa wuuna arki karaa faylalkaas, sida ka muuqata sawirka soo socda: / pp. Feylasha
Markaas, waxaad dooran kartaa feylasha, tusaha, iwm ee aad dooneysid inaad soo celiso, koobi ugu sameyso meesha loo cayimay, oo dhameystirto howlgalka soo kabashada xogta. Talaabada sadexaad waa soo celinta qeybta. Haddii hawlgallada Cirfiidku ay dib-u-bilaabaan qeybta, kiiskan, dabcan, waxaad isku dayi kartaa inaad soo celiso feylasha qayb kasta mid mid sida tallaabada hore. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu talinayaa inaad marka hore isku daydo inaad soo celiso qaybtii hore .. Habkani waa dhakhso mararka qaarkoodna, saameyntu way fiicnaan doontaa.
PreKaarka xusuusta looma aqoonsan karo tillaabooyinka soo-kabashada kombuyuutarka
NextHal furaha dib u soo celinta xogta disk qaybsiga disk adag